Laba haween Somali ah oo maxkamad lagu saaray Maraykanka, lagu eedeeyey in ay lacago u ururiyeen Al-shabaab. – Radio Daljir
Oktoobar 3, 2011 12:00 b 0
Minnesota, Oct 03 – Labadaan haweenka ah ee lagu eedeeyey in ay lacago ku taageerayeen ururka mintidka ah ee ka dagaalama dalka Somalia ee Al-shabaab ayaa la filayaa in ay kasoo muuqdaan maxkamad Maraykan ah si dacwadooda loo dhegeysto iyagun isu difaacaan.
Labada dumar ah ee lagu maxkmadaynayo dalkaasi Maraykanka ayaa lagu kala magcaabaa Aamina Faarax Cali iyo Xaawo Maxamed Xasan, waxaana Aamina Faraaxa Cali maanta oo Isniin ah kasoo muuqanaysaa maxkamadda, iyadoo waajahaysa eedeymo dhawr ah oo argagaxisnimo.
Labada haween ee Somalida ah ayaa ah muwaadiniin Maraykan ah, laakiin kasoo jeeda dalka Somalia, waxaana ay ka mid yihiin 20 Somali reer Minnesota ah oo lagu eedeeyey in ay lacago ku caawiyeen ururka Al-shabaab, iyo in ay dhallinyaro Somali-American ah u direen dalkaasi Somalia si ay uga barbar dagaalamaan ururka Al-shabaab.
Baarayaasha Maraykanka ah ayaa rumaysan in 21 dhallinyaro Somali ah ay tageen dalka Somalia halkaasi oo ay ku biireen ururka Al-shabaab iyadoo qaar kamid ah dhallinyaradaasi ay ku dhinteen dalka Somalia, halka intii kalena ay qaar kusoo noqdeen Maraykanka halka kuwo kalena ay weli Somalia ku suganyihiin.
Ninkii ugu horreeyey ee Somali American ah taga dalka Somalia ee ismiidaamiya ayaa isku qarxiyey xarunta sirdoonka Puntland ee magaalada Bossaso sannadkii 2008-dii, waxaana ninkaasi lagu magcaabi jiray Shirwac.
Dumarkaan lasoo eedeeyey ayaa ku tilmaamay eedeymaha loosoo jeediyey kuwo aan waxba ka jirin oo baadil, waxaana ay sheegeen in ay iska difaacayaan eedeymahaasi marka ay maxkmadda hortagaan, laakiin dacwad-oogayaasha ayaa sheegya in haweenkaan ay qabteen shirar iyo kulamo lacago loogu ururinayey Al-shabaab oo ay ku sifeeyeen samafal laakiin markii telephonadooda la tixraacay ay muuqatay in ay lacagaha u dirayeen ururka Al-shabaab.
Codad la duubay ayaa la sheegayaa in mid kamid ah eedeysanayaasha uu yiri ? iska daa samafalka kale oo xooga saara dhinaca Jihaad?.
Labadaan haween ah, ayaa sidoo kale la sheegay in ay la hadleen hoggaamiye isbahaysi la ah Al-shabaab, islamarkaana uu siiyey war-bixinnadii ugu dambeeyey ee meelaha uu dagaalka Somalia marayo.
Labadaan haween oo deggan magaalada Rochester ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa ku eedeysan shirqool ah in ay taageero maadi ah siiyeen urur shisheeye oo argagaxiso ah.
Dambi-baarayaasha Maraykanka ayaa sheegay in ay dhex-galeen oo ay dhageysteen 30?000 telephone ismarkaana wadahadallada telephone-ku ay dhex-marayeen labadaan haween iyo dad kale .
Sannadihii ugu dameeyey waxaa isasoo tarayey eedeymaha dadka Somalida ee lagu xiriirinayo hawlo ay ku taageerayaan kooxaha ka dagaallama Somalia ee islaamiyiinta ah, waxana arrintaasi si xun u saamaysay aragtidii laga qabay dadka Somalida oo halkaasi u haajirayy kaddib markii ay burburta dawladoodii dhexe ee Somalia sannadkii 1991dii.
Ururka Al-shabaab oo xiray xarumaha shirkadaha Nationlink, Telecom & Dahabshiil ee koonfurta Soomaaliya.